Ogow Intaadan Tegin (Know Before You Go) - Mayor | seattle.gov
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid munaasabadda ama aad rabto inaad codsato hoy naafonimo, fadlan wac Xafiiska Adeegga Macaamiisha ee Magaalada Seattle (206) 684-2489 ama (206) 684-CITY, Isniinta illaa Sabtida, 8da subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Adeegyada luqadda waxaa lagu heli karaa taleefan waxaana laga heli karaa goobta tallaalka.
Caafimaadkaaga iyo badbaadada naftaada iyo tan dadka kale, fadlan ha imaan ballantaada haddii:
Waxaad la kulantaa calaamado u eg COVID-19, oo ay ku jiraan qandho, cuna xanuun ama qufac; ama,
Waxaad la xiriirtay shaqsi wanaagsan oo COVID-19 ah.
Waxaad soo qaadan lahayd ballantaada
Aqoonsi sawir, (haddii aad haysato)
Maaskaro ama wejiga daboola
Xiro gacmo-gaaban ama dhar gacmo-gashi ah oo duudduuban ama si fudud u dhaqaajin kara si aad ugu tallaasho gacantaada kore.
Haddii aadan haysan aqoonsi sawir, weli waad awoodi doontaa inaad ku hesho tallaal bilaash ah.
Maxaa Loo Soo Kordhin
Xayawaanka guryaha lagu haysto (eey adeege mooyee).
Asxaabta iyo qoyska. Haddii aadan haysan daryeel ilmo ama aad u baahato caawimaad, waad soo kaxaysan kartaa carruur ama qof kale oo ku siiya caawimaad. Talaalada waxaa lasiin doonaa oo kaliya shaqsiyaadka balanta leh.
Boorso dhabar ama boorso garab weyn.
Goorma La Imaadaa
Fadlan imow sida ugu dhow waqtiga ballantaada sida ugu macquulsan.
Maxaad ka Filan kartaa Imaatinka
Markay yimaadaan goobta, dhammaan bukaannada iyo martida waxaa looga baahan doonaa inay:
Ku dhaq gacmahaaga gacme nadiifiye oo Xiro Maro wajiga daboosha ama Maaskaro
Haddii aadan haysan maaskaro, mid ayaa lagu siin doonaa.
Ka jawaab Su'aalaha Baaritaanka Caafimaadka
Calaamadaha su'aalaha baaritaanka caafimaadka ayaa lagu dhejin doonaa dhammaan gelinta waxayna u baahan yihiin dib-u-eegis dhakhso leh. Salaan ayaa goobta joogi doonta si loo helo xaqiijinta afkaaga ah inaadan astaamo calaamado lahayn ama aadan laxiriirin shaqsi COVID-19 wanaagsan. Tani waa in laga caawiyo hubinta caafimaadka iyo badbaadada bukaanka, martida, mutadawiciinta iyo shaqaalaha goobta jooga.
Adeegyada tarjumaadda ayaa laga heli karaa goobta.
Dhex mar Baaritaanka Amniga / Boorsada
Keen oo keliya waxyaabaha daruuriga ah si aad u hubiso inaan laguu diidin gelitaanka, oo aadan keenin boorso weyn ama shandad.
Waxa Laga Filayo Mar Keliya Gudaha Goobta
TALLAABADA 1: Is-Diiwaangelinta
Bukaannada waxaa lagu farayaa inay soo galaan qadka soo-hubinta iyo tallaalka.
TALLAABADA 2: Qaado Talaalkaaga
Tallaal waxaa qaadi doona mid ka mid ah wada-hawlgalayaashayada caafimaadka. Fadlan shaashadda ku duub gacanta aad doorbideyso in tallaalka la siiyo. Waxaad heli doontaa faashad oo, haddii la codsado, lagu siin doonaa macluumaad ku saabsan tallaalka aad qaadanayso.
TALLAABADA 3: Ku naso aagga kormeerka
Kursi fariiso Aaggeenna Kormeerka oo saacad u samee 15 daqiiqo. Haddii aad waligaa la kulantay falcelin daran, fadlan sug 30 daqiiqo.
TALLAABADA 4: U deji Xusuusin Jadwalka Qiyaastaada Labaad
Haddii tani ay tahay qiyaastaadii ugu horreysay, hubi inaad dejiso xusuus-qor kalandarka si aadan u iloobin qiyaastaada labaad. Habka ugu wax ku oolsan ee aad isaga ilaalin karto COVID-19 waa inaad buuxiso qiyaasta tallaalka ee loo baahan yahay.